Gudoomiyaha Barlamaanka Soomaaliya Mudane Jawaari oo saaka ku sii jeeda Turkiga – idalenews.com
Gudoomiyaha Barlamaanka Soomaaliya Mudane Jawaari oo saaka ku sii jeeda Turkiga
Gudoomiyaha Barlamaanka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari iyo wafdi uu hogaaminaayo ayaa lagu wadaa iney saaka oo Axad ah u kicitimaan magaalada Ankara ee Caasimada dalka Turkiga. Wafdiga Afhayeenka Barlamaanka ayaa casumaad rasmi ah oo qaadan doonta 3 cisho ka helay madaxda sare ee dalka Turkiga.
Kulanka oo inta badan diirada lagu saari doono arrimo u badan xiriirka labada barlamaan iyo dhameystirka balanqaadkii Turkiga ee dhismaha xarunta barlamaanka cusub ee Soomaaliya taasoo dowlada Turkiga sheegtey in muddo sanad gudahiisa lagu dhameystiri doono.
Dowlada Turkiga ayaa horey u balanqaadey dhisme xarun cusub oo uu barlamaanku yeesho sanadkii hore, taasoo wasiirkooda arrimaha dibada Mr. Ahmet Davutoglu ka hor sheegey kulan ay barlamaanka Somalidu ku lahaayeen xarunta golaha Shacabka ee magaalada Muqdisho.
Dhageyso: Qaar ka mid ah Musharaxiinta Jubbaland oo Barre Hiiraale kulan la qaatey
Madaxweyne Xasan Sheekh oo si diiran loogu soo dhaweeyay Magaalada Garoowe